Sidina avy any Moskoa mankany Hurghada sy Sharm El Sheikh amin'ny Aeroflot izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any Moskoa mankany Hurghada sy Sharm El Sheikh amin'ny Aeroflot izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Egypt • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Araka ny fandaharam-potoana nambara, Aeroflot dia hiasa sidina iray avy any Moskoa mankany Hurghada sy Sharm el-Sheikh isan'andro, manomboka amin'ny 1 Oktobra 2021.
Nambaran'ny mpitatitra saina Rosiana ny sidina voatondro ho any amin'ireo tanàna fialan-tsasatry ny Ranomasina Mena ao Egypt.
Aeroflot dia hiasa Hurghada sy Sharm el-Sheikh sidina isan'andro.
Ny sidina Hurghada sy Sharm el-Sheikh an'i Aeroflot dia hiasa avy any Moskoa.
Nambaran'ny mpitatitra saina any Aeroflot, Rosiana, androany, fa efa nanomboka ny fivarotana tapakila ho an'ny sidina mpandeha mivantana avy any Mosko, Russia mankany amin'ireo resort Red Hurghada sy Sharm el-Sheikh an'ny Egyptianina.
Araka ny fandaharam-potoana voalaza, Aeroflot dia hiasa sidina iray avy any Moskoa mankany Hurghada sy Sharm el-Sheikh isan'andro, manomboka amin'ny 1 Oktobra 2021.
Nanomboka tamin'ny 27 Aogositra, nampitombo avo telo heny ny isan'ny sidina mahazatra mankany Egypta i Russia-Hurghada sy Moscow-Sharm el-Sheikh - avy amin'ny sidina 5 ka hatramin'ny 15 isan-kerinandro isaky ny làlana taorian'ny fanapahan-kevitry ny foibe miasa federaly amin'ny ady atao COVID19.
Araka ny filazan'ny Federal Air Transport Agency, seranam-piaramanidina sivy, ao anatin'izany Aeroflot, dia nahazo ny fotoana hampiasana sidina amin'ireo zotra ireo, ankoatra an'i Rossiya. Talohan'izay, Aeroflot dia tsy niasa sidina mahazatra nankany amin'ireo toeran'ireny toerana ireny.
PJSC Aeroflot - Ny Rosiana Rosiana, fantatra amin'ny anarana hoe Aeroflot, no mpitatitra saina sy zotram-piaramanidina lehibe indrindra an'ny Federasiona Rosiana. Niorina tamin'ny 1923 ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ka nahatonga an'i Aeroflot ho iray amin'ireo zotram-piaramanidina tranainy indrindra eto an-tany.
Aeroflot dia manana foibe ao amin'ny Central Administratif Okrug (Distrika), Moskoa, ary ny foibeny dia seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sheremetyevo. Ny sidina dia manidina amin'ny toeran-kaleha 146 any amin'ny firenena 52, tsy tafiditra ao ny tolotra codeshared.